Izinhlelo zokusebenza ezikhanyayo, umphakeli wephrojekthi ekhanyayo | UHuayi Lighting
I-Huayi Lighting ingumkhiqizi okhanyisa ukukhanyisa ohlanganisa ukukhiqizwa nokuthengisa. Ngeminyaka engaphezu kwengu-30 yokuhlangenwe nakho kokukhanyisa, sinikeza amakhasimende ethu imikhiqizo ephezulu yokukhanyisa i-LED nezixazululo zokukhanyisa. I-Huayi Lighting inesipiliyoni esikhulu kumaphrojekthi ahlukahlukene kufaka phakathi ezentengiso, ezezimboni, amahhotela, isikhumulo sezindiza, indawo yokuthenga, indawo yokuhlala, ihhovisi, njll Ithemba lokuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni kumakhasimende amaningi, wamukelekile ukuvakashela inkampani yethu.
Maldives-St Regis Ihhotela
I-St Regis Hotel, ihluke impela. Njengoba inendawo enhle kakhulu, iMaldives iba enye yezindawo ezikhanga kakhulu emhlabeni kwezokuvakasha. Lezi zindlu zikanokusho zitholakala eziqhingini ezizimele zaseMaldives, ziheha izivakashi ukuthi zize zizobheka izimangaliso zemvelo nezitayela ezahlukahlukene zezinto zasolwandle.
IBangladesh -Amaphoyinti Amane nguSheraton Dhaka
Amaphuzu amane kaSheration Dhaka, eGulshan anikeza ukufinyeleleka okuhambisanayo esifundeni sezohwebo nezokuhlala. Amahhovisi, izitolo ezidayisa ezitolo, kanye nezindawo zokudlela kuyizinyathelo nje ezisuka ehhotela, kanti indawo enezikhundla ibamba amanxusa namakhomishini aphezulu. Ihhotela liqukethe amakamelo ezivakashi angu-149 nezitayela ezinakho konke ukunethezeka kwekhaya, okutholakala esitezi se-12 nangaphezulu, kuqinisekiswe i-panoramic viesw yedolobha. Ngaphandle kwalokho, lesi sakhiwo sombhoshongo sanamuhla sikhombisa ukunethezeka ngezinto eziningi. Isikhungo sokuzivocavoca sisebenzisa imishini ehlakaniphile nesifundi esiqeqeshiwe. Yamukela ama-panorama amahle asesibhakabhakeni asuka echibini elingapheli le-rooptop Sky Deck.